Abaabul xoogan oo ka socda xarumha Xisbiyada Mucaaradka | KEYDMEDIA ONLINE
Abaabul xoogan oo ka socda xarumha Xisbiyada Mucaaradka
Waxaa Magaalada Muqdisho ka socda abaabulkii ugu xoogganaa ee loogu diyaar garoobayo dibbad-baxa ay iclaamiyeen Midwga Musharixiinta Xilka Madaxweynaha Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xarumaha Xisbiyada Mucaaradka ah ee ku yaalla Magaalada Muqdisho ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq xooggan iyo abaabul adag oo ku wajahan sidii bulshada ku dhaqan Gobolka Banaadir uga qeyb qaadan lahaayeen dibbad-baxa Jimcaha.
Xisbiyada waaweyn ee Wadajir iyo Midowga Nabadda & Horumarka ayaa baraha bulshada ku baahiyay sawirada kulamo ay shir guddoominayaan hoggaamiyayaasha Xisbiyadaas waxayna sheegeen in ay ku jiraan diyaar garowgii ugu danbeeyay ee Bannaan-baxa.
Banaanbaxa ay ku baaqeen golaha Midowga Musharixiinta ayaa ah mudaharaad nabaddeed oo siyaasiyiinta iyo shacabka taageera ku muujin doonaan aragtidooda ku aaddan doorashooyinka iyo Madaxweynaha muddadii sharciga ahayd ka dhamaatay ee Farmaajo.
“Shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir oo ay hor kacayaan Midowga Musharixiinta ayaa maalinta Jimcaha ee 19ka Febuary gudan doona qodob dastuuri ah oo uu xaq u siiyay dastuurka KMG ah ee inoo qoran”. Ayaa lagu yiri war kasoo baxay Xisbiga Midowga Nabadda & Horumarka.
Waxaa si toos ah xarummaha Wadajir Party uga socda abaabulka bannaanbaxa ay ku dhawaaqeen Midawga Musharraxiinta Madaxweyne maalinta Jimcaha ah. Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir mudane Abdirahman Abdishakur Warsame ayaana ka qeyb qaadan doonna bannaan baxa. Ayaa sidoo kale lagu sheegay war uu soo saaray Xisbiga wadajir.